Nhau dzeZimbabwe, 05 Kurume 2019
Chipiri 5 Kurume 2019
Kurume 05, 2019
MDC Yochema Chema neKusungwa kweNhengo Dzayo
Mutevedzeri wasachigaro weMDC vachimirira Harare East muNational Assembly, VaTendai Biti, nhasi vakumbira mutauriri wedare iri, Advocate Jacob Mudenda, kuti vachengetdza nhengo dzeparamende dzebato ravo.
Muzvare Joanna Mamombe Vanovharirwa kuChikurubi
Vanomiririra Harare West muparamende, Muzvare Joanna Mamombe, nhasi vavharirwa mujere reChikurubi kusvika musi wokuzotongwa kwavo musi wa 19 Kurume.
ZINASU Yochema Chema neMamiriro Akaita Dzidzo muNyika
Vadzidzi vezvikoro zvepamusoro pasi peZimbabwe National Students Union vanoti kuwondomoka kwehupfumi munyika kwave kuvhiringidza dzidzo yavo.
Zvipatara ZveHurumende Zvine Muchina Mumwe weKurapa Chirwere Chegomarara Uri Kushanda
Munyika maita dambudziko guru sezvo michina inoshandiswa mukuderedza hukasha hwechirwere chegomarara isiri kushanda.
Chidzambwa Odoma Chikwata chemaWarriors
Murairidzi wemaWarriors Sunday Chidzambwa ashevedza mukamba vatambi vake vemutambo mukuru we 2019 Africa Cup of Nations neCongo Brazzaville.
Zanu PF Inoshoropodza Danho reAmerica Rekuwedzera neGore Zvirango
Asi bato reZanu PF rinoti zvirango zviri kuramba zvichitemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemakambani ari pasi pehurumende nenyika dzinosanganisira America nedzimwe dzine pfungwa dzakafanana neAmerica hazvisi pamutemo, uye zvinoshoreka.
Dutumupengo Rovhiringa Hupenyu hweVanhu kuChamhembe kweAmerica
Vanhu vanodarika makumi maviri nevatatu vakafa munjodzi yedutumupengo remhepo nemvura kumatunhu eAlabama, Florida, South Carolina ne Georgia nemusi weSvondo.
MDC Inoti America Ndiyo Iri Pamberi Mukubatsira Zimbabwe Mune Zvakawanda
VaZvidzai Ruzvidzo, avo vanogara muColumbus ku Ohio, vanoti veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti zvirango zviri kutemerwa vanhu vari kutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe, hazvineyi nezviri kutaurwa neZanu PF zvekuti nyika ndiyo yakatemerwa zvirango.
Zanu PF Inoti Zvirango zveAmerica Ngazvibviswe
Mutungamiriri weAmerica, VaDonald Trump, vakawedzera neMuvhuro rimwe gore pazvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende yeZanu PF, pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende yaVa Emmerson Mangagwa.
"Mutikitivha" Akasunga Muzvare Mamombe Otambiswa Chamutavanhava muDare neGweta Ravo
Pakupa huchapupu, mumwe anozviti mutikitivha VaDennis Muroiwa vakasiya vanhu vasina mate mukanwa mudare mushure mekunge vakundikana kupindura mibvunzo yakanangana nebasa ravo.